5 यूरोपमा सर्वश्रेष्ठ पार्टी शहरहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5यूरोपमा सर्वश्रेष्ठ पार्टी शहरहरू
युरोपको महल र आकर्षक सडकमा र ठाउँहरू हजारौं बर्षदेखि अचम्मको कथाहरूको लागि सेटिंग गरिएको छ. आजसम्म युरोप विश्वमा पछाडि पार्टीको गन्तव्य हो. यो दुनिया भरका यात्रुहरूका लागि पार्टीहरूको मक्का हो स्नातक र स्नातक यात्राहरू. त्यसैले, हामीले सावधानीपूर्वक सबै भन्दा राम्रो चयन गरेका छौं5एक महाकाव्य र जंगली छुट्टी को लागी यूरोप मा पार्टी शहरहरु.
एम्स्टर्डम गर्न बर्लिन, युरोपको सबैभन्दा ठूलो राती क्लबको लागि बर्न्स बरन, द्वारा रेल यात्रा वा क्लब हपिंग, सबैभन्दा जंगली यात्राको लागि तपाईंको सिट बेल्ट कस्नुहोस्.
रेल यात्रा युरोप मा यात्रा गर्न को लागी सबैभन्दा पर्यावरण अनुकूल छ. यस लेखमा बचत एक ट्रेन द्वारा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको छ, को विश्वमा सस्तो ट्रेन टिकट वेबसाइट.
1. बर्लिनमा भोज, जर्मनी
युरोप मा मित्रैलो शहरहरु मध्ये एक, बर्लिन कलाकारहरूको लागि मक्का हो, संगीतकार, र विश्वको सर्वश्रेष्ठ DJs. यसको इतिहास र संस्कृतिले यसको विविधता र सुपर खुला दृष्टिकोणलाई प्रभावित गरेको छ, यसको मतलब केहि पनि जान्छ. त्यसैले, बर्लिन यूरोपमा जंगली र सबै भन्दा राम्रो पार्टी शहर हो.
बर्लिनको क्लब र पार्टी दृश्य सामान्यतया अध्यारो पछि शुरू हुन्छ. यदि तपाईं बर्लिनको नाइट लाइफ बर्लिनर जस्तै अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने, आरामदायक जुत्ता प्याक गर्नुहोस्, आकस्मिक पोशाक र शुक्रबार आइपुग्नुहोस्. बर्लिनमा धेरै बारहरूमा एकमा पेय लिनुहोस् र औद्योगिक क्षेत्रतर्फ लाग्नुहोस्.
बर्लिनमा सर्वश्रेष्ठ क्लबहरू बर्लिनको औद्योगिक क्षेत्रमा र रेल ट्र्याक मुनि लुकेका छन्. आफैलाई पार्टीको लागि तयार गर्नुहोस् जुन कहिलै रोकिदैन, वा अन्तिम मानिस खडा हुँदा मात्र रोकिन्छ. बर्लिनर्सको क्लबि n रातहरू जति सक्दो चाँडो सुरु हुन्छ 1 आइतबार रात सम्म शनिबार छु. यसले निश्चित रूपमा बर्लिनलाई युरोपको एकदमै क्रेजिष्ट र उत्तम पार्टी शहरहरूमा राख्दछ, जुन विश्वभरि पर्यटक र क्लबहरू यात्रा गर्दछ.
बर्लिनमा सर्वश्रेष्ठ नाइटक्लब के हो??
यदि तपाईं पार्टीिंगको h 48 घण्टासम्म हुनुहुन्छ र तपाईंसँग एउटा मात्र क्लबको लागि समय छ, त्यसोभए बर्घाइनमा पार्टी गर्न नबिर्सनुहोस्. सबै भन्दा राम्रो टेक्नो र घर ध्वनि सबै नृत्य अन्तमा नृत्य फ्लोर रक हुनेछ.
फ्रेन्कफर्ट ट्रेन बाट बर्लिन
ट्रेन द्वारा कोपेनहेगन बर्लिन
ह्यानोभरदेखि बर्लिन ट्रेन द्वारा
2. बुडापेस्टमा पार्टी, हंगेरी
दिन र सूर्यास्त घण्टाको बखत, बुडापेस्ट यसको प्रभावशाली वास्तु रत्नहरू र साइटहरूको साथ एक अचम्म आश्चर्यजनक हो. जब तपाईं सडकको वरिपरि घुम्नुहुन्छ, तपाईंको आँखा मुश्किल यूरोप मा सबै भन्दा सुन्दर स्थलहरु पछि ट्र्याक राख्न सक्नुहुन्छ. तर, रातमा तपाईं एक वैकल्पिक संसार पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, विचलित भवनहरूको विश्व युरोपको सबैभन्दा असामान्य बारहरूमा फर्कन्छ, र यो अद्वितीय दृश्य बुडापेस्ट हाम्रो मा राख्छ5युरोप मा सबै भन्दा राम्रो पार्टी शहरहरू.
अँध्यारो पछि, वैकल्पिक ठाउँमा, जहाँ त्यहाँ शिष्टाचार वा घर नियमहरू छैनन्, कुरा जंगली जान बाध्य छन्.
के उत्तम नाइटक्लब भित्र छ बुडापेस्ट?
सिम्पल गार्डन जिल्लामा बुडापेस्टको आइकनिक बर्बाद बार हो7र यसको भूलभुलैया माथिको सेक्सन र बुडापेस्टको पार्टी रातहरूको ब्यबल्डिंग अनुभवको लागि भ्रमण गर्नुपर्दछ।.
3. प्राग मा पार्टी, चेक गणतन्त्र
प्राग युरोपको सबैभन्दा भव्य शहरहरू मध्ये एक हो. दिनको समयमा तपाईलाई महलमा फर्किएको जस्तो लाग्नेछ, राजकुमारहरू, र नाइट्स कथा, तर रात को समयमा तपाईं पागल रातको जीवनको लागि यात्रा गर्नुहुन्छ, जहाँ अवरोधहरू ढोका पछाडि छोडिन्छन्.
शहर नदीको किनारमा बियर बगैंचाले भरिएको छ, पबहरूमा, र शहरको अचम्मको दृश्यको साथ बारहरू र निश्चित रूपमा कुख्यात क्लब दृश्य.
के उत्तम नाइटक्लब भित्र छ प्राग?
प्राग युरोपको सबैभन्दा ठूलो क्लब हो, --कथा कार्लोवी Lazne क्लब. त्यसैले, यदि तपाईं युगको उत्तम पार्टी शहरहरू पत्ता लगाउन आफ्नो साथीहरू वा यूरोट्रिपसँग प्रागमा यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसोभए यो तपाइँको रोमांचमा रोकिनु पर्छ. सावधान रहनुहोस् कि एक पटक तपाईं क्लबको ढोका प्रविष्ट गर्नुभयो, तपाईं पूर्ण भिन्न व्यक्ति बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ प्रागमा जे हुन्छ, प्राग मा रहन्छ.
4. एम्स्टर्डममा पार्टी, नेदरल्यान्ड्स
यसको सुन्दर नहरहरूको लागि प्रसिद्ध र कफी पसल, एम्स्टर्डम एक लोकप्रिय यूरोपीय हो छुट्टी गन्तव्य. योसँग धेरै शान्त वाइब छ, यसको कुख्यात रेड लाइट जिल्ला र कफि पसलहरूको बावजुद.
जबकि डचले कम कुञ्जी भेलाहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ, यदि तपाइँ विश्व भर बाट पर्यटकहरु सोध्नुहोस्, तिनीहरू भन्छन् कि एम्स्टर्डमको अर्को पक्ष छ. In comparison to the other cities in our best party cities in Europe, एम्स्टर्डम मा, तपाईं प्राय क्लबहरूमा ट्रान्स ध्वनि फेला पार्नुहुनेछ, तर पनि प्रत्यक्ष संगीत. एम्स्टर्डममा प्रत्यक्ष कार्यक्रमहरू धेरै लोकप्रिय छन्.
के उत्तम नाइटक्लब भित्र छ एम्स्टर्डम?
केवल केही उत्तम लाइभ संगीत क्लबहरू मेलकवेग र बिहहुइस हुन्, र सब भन्दा राम्रो नाइटक्लबहरू De Marktkantine र शेल्टर हुन्.
5. भियना मा पार्टी, अस्ट्रिया
शहर जो हामी सबै यसको अभूतपूर्व ओपेरा र सांस्कृतिक जीवन को लागी जान्छौं को एक शानदार र रमाईलो राती जीवन पनि छ. छिमेकी देशहरूमा अन्य नाइटक्लब दृश्यहरूको विपरित, भियनाको रात्रि जीवन दृश्य मित्रैलो र बढी रमाईलो छ. उदाहरणका लागि, भियना मा प्रवेश शुल्क आराम ढोका नीतिहरु संग कम छ.
भियना मा, तपाइँ प्राय: टेक्नो क्लबहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ, तर केही क्लबहरूमा भूमिगत र एसिड शैलीहरू.
के उत्तम नाइटक्लब भित्र छ भियना?
सर्वश्रेष्ठ टेक्नो पार्टीहरूको लागि दास वर्क र ग्रेल फोरलेमा जानुहोस्. यदि तपाईं क्लब क्रल चाहनुहुन्छ भने गुर्तेलमा जानुहोस्, एक शहर जुन बीचको बीचमा पुग्छ. यो त्यहाँ तपाइँले प्राय पब र क्लबहरू क्लस्टर गरिएको पाउनुहुनेछ. Venster99 जाँच गर्न निश्चित गर्नुहोस्.
एलेक्त्रो गन्नर भियनाको नक्कली राती जीवनको एक राम्रो उदाहरण हो. इलेक्ट्रिक शपमा अवस्थित छ, यो भिडियो स्थापनाहरू र इलेक्ट्रो संगीतको लागि पनि एक ठाउँ हो. Le Loft बार महाकाव्य सूर्यास्त र शहर दृश्यको साथ सोफिटेल भियना स्टेफनसडमको शीर्षमा अवस्थित छ।.
यूरोपमा दलहरूको बारेमा बढी जानकारी
के मौसम यूरोप मा रात जीवनको अनुभव गर्न उत्तम छ?
युरोपमा सब भन्दा राम्रो पार्टी शहरहरू यात्रा र पत्ता लगाउन वसन्त र सुरुको गिरावट सबै भन्दा राम्रो मौसम हो.
युरोपको नाइटक्लबहरूमा प्रवेश शुल्कका लागि मूल्य दायरा के हो?
प्रवेश शुल्क देश-देश फरक हुन्छ. अधिकांश यूरोपियन शहरहरू धेरै किफायती छन्, उदाहरणका लागि, प्राग र बुडापेस्ट, 5-20 यूरो प्रवेश र उचित मूल्यमा मदिरा, केही स्थानहरू महँगो छन्, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, चाँडै आयो, त्यसैले तपाइँ लाममा लामो समय खडा गर्नुपर्दैन.
कुन शहर युरोप मा नयाँ वर्ष को पूर्व संध्या र क्रिसमस को लागी उत्तम रात जीवन छ?
क्रिसमस र नयाँ वर्षको चाडपर्वहरूका लागि उत्तम शहर निश्चित रूपमा बर्लिन हो यदि तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तंग बजेट. एम्स्टर्डम र प्राग जाडोमा सुन्दर हुन्छन्, तर थोरै मूल्यवान.
निष्कर्षमा पुग्न गर्न, युरोपसँग कुनै स्वादको लागि प्रस्ताव छ, चाहना, दुष्टता स्तर, र बजेट. हाम्रो शीर्ष5पार्टी शहरहरू सबै विश्वहरूको सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव गर्दछ. तपाईं निश्चित रूपमा बार हपिंग वा प्रत्यक्ष संगीत क्लबहरूसँग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र यूरोपमा जंगली नृत्य फ्लोरहरूमा जारी राख्न सक्नुहुन्छ, सबै एकै रातमा. यो सबै शीर्षमा, हरेक शहर सजीलो पहुँच योग्य छ मार्फत रेल यात्रा, त्यसोभए यदि यो तपाईंको पागल पार्टी सपना हो भने पागल पार्टी सप्ताहन्तमा जानुहोस् र सबै भ्रमण गर्नुहोस् 5, त्यसोभए युरोप पर्खन्छ.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हाम्रो सूचीमा कुनै पनि सुन्दर पार्टी शहरहरूमा सस्तो ट्रेन टिकटहरू फेला पार्न मद्दत गर्न हामी खुशी हुनेछौं.
के तपाईं हाम्रो ब्लग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ “युरोपमा Best उत्तम पार्टी शहरहरू” तपाईंको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?URL = https://www.saveatrain.com/blog/best-party-cities-europe/ اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय ट्रेन मार्गहरू भेट्टाउनुहुनेछ - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, र तपाईं परिवर्तन गर्न सक्छन् / fr गर्न / डी वा / ES र अधिक भाषा.
AmsterdamParty berlinparty budapestparty europenightlife europepartycity नाइटलाइफ पार्टी PragueParty TravelVienna viennaparty